Dib ugu laabashada Miiska meesha ma ka saaraysaa khilaafka doorashada? | Hangool News
Dib ugu laabashada Miiska meesha ma ka saaraysaa khilaafka doorashada?
Waxaa muuqata in haatan muhiim loo arko dib ugu laabashada heshiiskii 17-kii bishii September kaas oo ay wada gaareen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goballeedyada iyo gobalka Banaadir.Dadka falanqeeya arrimaha Soomaaliya ayaa sheegaya in isbadallada waaweyn ee dhacay saacadihii la soo dhaafay ee dhamaatood saldhigu yahay ku laabashada heeshiikaas ay yihiin kuwo muujinaya rajo iyo horumar laga gaaray ismari-waagii muddaba ka taagnaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya.
Daahir Qoriyow Isaaq oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya,ayaa BBC-da u sheegay in dib ugu noqoshada miiska wadahadalka ay tahay arrin rajo galineysa shacabka Soomaaliyeed.”Waxay ila tahay in wanaagga ah in miiska wadahadalka lagu noqonayo ay tahay rajo fiican oo u soo hoyatay umadda Soomaaliyeed” ayuu yiri Daahir Qoriyow .
Inuu madaxweyne Farmaajo oggalaado doorasho dadban oo ku saleysan heshiiskii 17-kii September meesha ma ka saaraysaa khilaafkii taagnaa?
Hangoolnews:- Marka la fiiriyo hadalladii ugu dambeeyay ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,war-murtiyeedkii Galmudug iyo Hirshabeelle, soo dhaweyntii raysal wasaare Rooble iyo mamaul goballeedyada Koofur galbeed Jubaland iyo Puntland iyo qaar ka tirsan mucaaradka ,waxaa muuqanaya in waxa ugu weyn ee hadda la isla oggalyahay uu yahay dib ugu laabashada miiska wadahadalka iyadoo udub dhaxaad looga dhigayo wadahadalkaas heshiikii 17-kii September, taas oo loo arko fursad meesha ka saari karta khilaafka xooggan ee ka taagan arrimaha doorashooyinka. Balse dhinaca kale waxaa dhici karta in aysan arrin fudud noqon in la soo afjaro khilaafkaas sababtoo ah dhinacyada qaar ayaa laga yaabaa in ay shuruudo ku xiraan waxyaabaha qaar.
“Si waa uga saareysaa oo wadahadalkaa lagu soo nqonayaa,sina ugama saarayso qolyaha qaar ayaa laga yaabaa inay sharuudo ku xiraan oo wakhti sii dheereyo ayaa noqon karta caqabad cusub oo u baahan in laga gudbo “ayuu yiri Mr Qoriyow .
“Sidan ayaa ila quman in lagu xalliyo ismarin waaga doorashada Soomaaliya”
Maxaa Beesha Caalamka ka hor taagan in ay xal khasab ah dul dhigto madaxda Soomaalida?
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaaha Farmaajo,ayaa khudbadii uu xalay jeediyay ku sheegay in hadda iyo markii horaba ay diyaar u ahaayen doorasho aaney ku xirneyn shuruud oo lagu saleynayo heshiiyadii horey loo gaaray, “Annagu ka dowlad ahaan, waxaan diyaar u ahayn in la qabto doorasho aan shuruudi ku xirnayn oo saldhiggeedu yahay heshiisyadii horey loo gaaray ee 17ka Sebteembar 2020, iyo tala-bixintii guddiyada farsamada ay ku gaareen magaalada Baydhabo 16-kii Febraayo 2021,”
Maxaa ka mid ahaa qodobbadii shirkii ugu dambeyay la isku mari waayay?
Khilaafka doorashooyinka Soomaaliya ayaa muddaba soo socday wuxuuna hadba soo marayay marxalad iyadoo shirkii ugu dambeeyay ee teendhada Afisyooni waxyaabaha la isku mari wayay ay ka mid ahaayen sharuudo ay wateen maamul goballeedyada Puntland iyo Jubaland .
Qodobbadaas waxaa ka mid ahaa amniga
In wixii ka dambeeyay 19-kii bishii Febraayo aan la isku halleyn karin amniga ciidamada dowladda maadama xiligaas ay weerar ku qaadeen qaar ka mid ah siyaasiinta mucaaradka ah oo magaalada Muqdisho ka sameeynayay dibadbax ay uga soo horjeedaan dowladda.
2 – Qodobka kale oo ah in shirka la balaariyo, lagana qeybgaliyo musharixiinta madaxweynaha qaarkood, ,bulshada rayadka iyo haweenka.
3-Qoddobka kale ayaa waxa uu ahaa in Beesha Caalamka laga qeybgaliyo, si ay u damaanad qaaddo, goobjoogna uga noqoto waxyaabaha lagu heshiinayo.
4. Waxaa kale oo jirey qodob sheegaya in madaxweynuhu uu dhimo awoodiisa uuna qoro waraag uu saxiixayo oo ku sheegayo in uusan qaadan karin go’aanno masiiri isla markaana uu sidaa ku sii ahaannayo ku sime inta laga gaaro doorasho.
Kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobbadii ugu waaweynaa ee la aaminsanyahay in ay sabab u noqdeen burburka shirkii ugu dambeyay oo xiligaa dowladda ku eedaysay inuu ka socon waayay dhanka maamullada Puntland iyo Jubaland,hase yeeshee maamulladan ayaa dhankooda sheegay in aanu jirin shir fashilmay balse uu madaxweyne Farmaajo xiligaas ku baaqay in wadatashi la isugu laabto dibna la isugu soo laabto.